Dowladda Maraykanka oo dishay 40 kamid ah xagjiriinta Shabaab iyo Daacish. | puntlandi.com
Dowladda Maraykanka oo dishay 40 kamid ah xagjiriinta Shabaab iyo Daacish.
Wasaaradda gaashaandhiga ee dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay ciidamadoodu ay dileen 40 kamid ah maleyshiyada Shabaab iyo Daacish, kadib weeraro duqaymo oo dabayaaqada todobaadkii lasoo dhaafay ka bilowday gudaha Soomaaliya.
Ciidanka Maraykanka ayaa ku qaaday illaa shan weerar saldhigyo argigixisadu ku lahaayeen gudaha Soomaaliya, waxaana halkaas lagu dilay ugu yaraan 36 xubnood oo katirsan ururka Alshabab iyo afar katirsan ururka Daacish.
“Iskaashi dhexmaray xukuumadda federaalka Soomaaliya, ciidamada Mareykanka waxay qaadeen 5 weerar oo duqayn ah oo ka dhan ah Al-Shabaab iyo ISIS, laga soo bilaabo sagaalkii November ilaa 12-keedii, ayuu yidhi afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhiga oo lagu magacaabo Colonel Rob Manning.
Weeraradaan oo ay qaadeen ciidanka Maraykanka ee Afrika, ayaa jawaab u ahaa qaraxii dhimashada badan dhaliyay ee ka dhacay Zoobe, kaasoo ay ku dhinteen 385 qof.